१. कोरोना संक्रमणले वितिय क्षेत्रको वैकहरुलाई कस्तो असर गरेको छ ?
:– ठयाक्कै सग भन्नु पर्दा सम्पुर्ण क्षेत्रलाई कोरोनाले असर गरेको छ । वैंकिङ क्षेत्रहरु यस्ता क्षेत्र हुन्,अन्य क्षेत्रहरु चलायनमा हुँदा ती क्षेत्रहरुवाट सहजीकृत गर्ने र तीनै क्षेत्रहरु फस्टाउँदाखेरी वैकले त्यसैको प्रतिफल खाने हो ।
जस्तो कृषीमा लाग्ने कृषकले राम्रो वालीनाली उत्पादन होस , वेलैमा मल,विऊ,वर्षात र सिचाई समयमा नै गर्न पाइयोस र उत्पादन सन्तोषजनक होस भन्ने मात्रै कृषकले सोचेको हुन्छ । अर्को उद्योग गर्नेको उत्पादनमा श्रमिकहरु राम्रो र सहजरुपमा पाइयोस र उत्पादन गर्न सकियो भन्ने मात्रै हुन्छ । अनि बजारीकरण गर्न सकियोस र मुनाफा कमाउन सकियोस भन्ने सोचाई उद्योगको हुन्छ ।
अन्य हरेक क्षेत्रको आफ्नो आफ्नो हुन्छ तर वैंकिङ मात्र यस्तो क्षेत्र हो ,जस्ले चाहिँ सम्पुर्ण क्षेत्र नै चलायमान भएको हुन्छ ।
अनि मात्रै वैकिङ क्षेत्र फस्टाउन सक्छ । एउटा जलविद्युत क्षेत्र त्यति प्रभावित नहोला किन की यसको उत्पादन रोकिएको छैन । तर अन्य सम्पुर्ण क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा वैक क्षेत्रलाई कहि न कही प्रभाव परिरहेको छ । आजको दिनमा टुरिजम होटल लगायतभन्दा कम प्रभावित भएको अवस्था छैन । वैंकलाई ठुलै असर गरिरहेको छ ।
२. भनेपछि कोरोनाका कारण वितिय क्षेत्रको वैकहरु वन्द हुने अवस्था छ ?
:– वैंकिङ क्षेत्र वन्द हुने अवस्थामा नै छन भनेर त मिलिहाले न । वन्द हुने अवस्थामा चाहिँ हामी वैंक वितिय क्षेत्रहरु नयाँ नयाँ इन्युभेसनमा हामी लारिहन्छौं ।
३. तर सवै क्षेत्र चौपट भएजस्तो वैक पनि चौपट भयो ?
:– यसलाई त्यसो भनिहाल्नु भन्दा पनि कृषिमा चोपट भयो भन्दा पनि कृषि यथास्थितीमा रहिराखेको छ । कृषिमा कोरोनाको कारण धेरै ठाउँमा प्रभाव पा¥यो अथवा वजारीकरणमा कहीँ कहीँ समस्या पारे पनि कृषिमा धेरै फरक पा¥यो भन्दैनौं ।
तर अन्य क्षेत्रमा प्रभाव पारेको कारणले वैंक वितिय क्षेत्रको मुनाफामा संकुचन पक्कै ल्याएको हो । यस्ले मुनाफमा हिट गरेको हो । तर वितिय क्षेत्र वन्द हुने अवस्थामा हो भन्ने होइन तर मुनाफामा चाहिँ हिजो दिनमा भन्दा आजको दिनमा पक्कै कमी हुने अवस्थामा छ ।
४. त्यसो भने यो अवस्थामा वैकहरु कसरी अघि वढ्छ त ?
:– हिजो र आजको दिनलाई हामीले नियालेर हेर्ने हो भने पक्कै पनि वैंकले सोच्नु पर्ने वेला आएको छ । वैंकलाई अहिले कहाँनेर अप्ठ्यारो छ भने जुन वैंकमा पव्लिकको डिपोजिट छ, त्यो डिपोजिटको निश्चित व्याज दिनु पर्छ ।व्याज भुतmानीमा कसैलाई रोकेको अवस्था छैन ।
तर वैंकले जुन कर्जाहरु लगानी गरेको छ , त्यसलाई प्रभाव पारेको छ । कर्जा प्रवाह गरेपछि अहिले व्याज माग्नु सक्ने अवस्था नै छैन । जस्तो यातायात व्यवसायीहरु मारमा छन् ।चैतदेखि यातायात वन्द भयो अहिले असोजदेखि सन्चालनमा आएपनि प्यासेन्जर नपाएर सन्चालनको लागत पनि उठेको छैन ।
केही केही क्रणिहरुलाई निकै अप्ठ्यारो परिहरको छ । अनि हाम्रो विक्री गर्नुपर्ने चाहिँ सम्पुर्ण उधारोमा जाने हामीले लिएको निक्षेपचाहिँ नगदमा भुतmानी गर्नु पर्दा अलिकति असन्तुलन भएको हो की भन्ने कुरा एकातिर देखिएको छ । अर्को कुरा हामी मिडियामा पनि देखिरहेका छौं । वैंक वितिय क्षेत्रमा तरलता भयो ।
नेपालीहरुसँग पैसाको कमी रहेनछ ।तर कर्जाको माग भने करिव करिव शुन्य छ , आज हाम्रो ६,७ महिनाको अवस्थामा आइपुग्दा कर्जाको माग नै करिव करिव शुन्य छ । त्यसकारणले निक्षेप थुप्रिदै जाने तर कर्जाको माग नहुनुले गर्दा हिजो जुन अवस्थामा वैंकहरुले मुनाफा गरेका थिए अव त्यो अवस्था रहेन । त्यसकारणले अव मुनाफा सुपर हुदैन भने लागतहरु कटौत ी गर्न सक्छन् ।त्यहाँ –त्यहाँ वैंकहरुले खर्च कटौती गरे ।
हिजो हुने गरेको खर्चहरु कटौती गरेका छन् । विज्ञापन , कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धिको कुरामा कटौती गरेको छ । अन्य जहाँ जहाँ खर्च कटौती गर्न सकिन्छ त्यहाँ क्रमस कटौती गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यसरी वैंकले यावत कुरा विचार गरेर मुनाफालाई केही केही कायमै गर्नु पर्छ । नत्र वैंकहरु प्रति पव्लिकले फेस गर्दैनन् । तसर्थ हरेक वैंकले मुनाफा गर्ने कुरामा दतचित रहन्छ । वैंक वितिय क्षेत्रहरु अन्तिम अवस्थामा पनि कसुरी सरभाइभ रहने , कसरी मुनाफामा रहने भन्ने प्रयत्नमा रहन्छ । वैंक वितय क्षेत्रलाई एउटा सहज चाहिँ के भएको छ भने अघिल्लो वर्षको चैतदेखि असार सम्म आइपग्दा ४ महिना कोरोनाले असर ग¥यो । त्यो आर्थिक वर्ष ८ महिना राम्रै भयो । अव यो आर्थिक वर्ष पनि साउन,भदौ र असोज महिना सम्म असरा ग¥यो , अव कोरानाले ठिक ग¥यो भने अव फेरी ९ महिना त ठिकठाक हुने भयो ।
यी दु्ई आर्थिक वर्षको वितिय विवरण चाहिँ ठिक–ठिकै रहने र त्यत्रो धेरै सोच जस्तो असर नगर्न पनि सक्छ की भन्ने हामी वैकं म्यानेजमेण्ट सचेत पनि छौं ।
५. वैंक वितिय संस्थाबाट क्रण लिएर व्यापार व्यवसाय गरेकाहरुलाई कसरी सहजता गर्दै हुनु हुन्छ ?
:– नेपाल सरकार,नेपाल राष्ट्र वैंकले कोरोनाका कारणले गर्दा के नीति लियो भने कोरोनाका कारणले गर्दा किस्ता तिर्ने महानुभावहरुले चैत्रको किस्ता यदि चैत्र महिनामा नै झुतmान गर्नु हुन्छ भने उहाँहरुले तिर्नु पर्ने व्याजको १० प्रतिशत घटाएर वैंक वितिय संस्थाले लिनुस् भन्यो हामीले सोही अनुसार ग्राहकलाई सुचना प्रवाह ग¥यौं ।
जस्ले सोही अनुसार गर्नु भयो हामीले सोही अनुसार नै ग्राहकहरुलाई व्याज रकम तत्काल फिर्ता ग¥यौं । त्यसपछि लगतै फेरी राष्ट्र वैंकले के सकुर्लर ग¥यो भने भने वैशाख , जेठ असारमा चैतमा जुन व्याजदर कायम छ त्यो व्याजदरमा २ प्रतिशत घटाएर मात्रै असुल गर्नु है भनेर वैंक वितिय संस्थालाई निर्देशन दियो ।
त्यसकारण हामीले वैंकले भने वमोजिम तिर्ने ग्राहकहरुलाई २ प्रतिशत व्याज व्याज फिर्ता ग¥यौं । र जस्ले तिर्नु सक्नु भएन उहाँहरुले तिर्न पर्ने पैसाबाट घटाएर हामीले लेखाङ्कन ग¥र्यौं । तर अव साउनदेखि यता सरकारले केही नभनेको कारणले गर्दा हामी आफैंले उनीहरुको अवस्था हेरिकन कम्तीमा सवा प्रतिशत जति हरेक क्रणलाई व्याज घटायोै ।
यसरी हामीले अहिले क्रणीहरुको अवस्थालाई हेरेर व्याजलाई समायोजना गरेका छौं । अहिले हामीले के भनिरहेका छौं भने वैंकले यतिवेला धेरै मुनाफा गर्नु भन्दा पनि क्लान्टलाई सरभाइभ गराउने तिर नै गंभीर छौ र उसको व्यवसायलाई कसरी पुर्नउत्थान गराउने भन्ने तिर सचेत छौं ।
यदि कोही अति प्रभावित व्यवसायी हुनु हुन्छ, व्यवसाय सन्चालन गर्न नै अप्ठ्यारो परेको छ भने चालु पुँजी तर्फको कर्जा छन् भने त्यस्ता कर्जाहरुका लागि हामी २० प्रतिशत सम्म कर्जा व्यवसाय सन्चालनको लागि थप गरिदिन सक्छौं ।
म तपाईको लोकप्रिय मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु की कम प्रकृतिका कर्जा अथवा किस्ता तिर्ने कर्जा छन् भने पनि उहाँहरुलाई चाहियो भने १० प्रतिशत सम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्छौं । अब कोभिडको कारणले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आउनु परेको छ भने हामी सहयोग गर्छौ । उहाँहरुले केह गर्ने सोंच छ भने हामी उहाँहरुलाई एकदमै सरल व्याजदरमा व्यवसया सन्चालन गर्न सहयोग गर्छाैं । त्यस्ताहरुलाई हामी ८ प्रतिशत व्याजदरमा अथवा त्यो भन्दा कममा पनि हामी लगानी गर्छौ ।
६. मितेरी वैंक सवैको प्रिय हुनेको पछाडि के छ कारण ?
:– अव मितेरीको केन्द्रिय कार्यालय धरानमा छ, यहाँ सम्म आइपुग्नका लागि हामीलाई माया गरेर आउनु हुन्छ , पहिलो श्रेय नै ग्राहकहरु हुन् । मितेरीको सफलताको हकदार उहाँहरु हुनु हुन्छ । दोश्रो हकदार कर्मचारीकोे लगनीशलता परिश्रमकै कारण हो ।
७. किन मितेरी वैंकमा गा्रहकहरुले कारोबार गर्न आउने , के छ त्यस्तो वैकले ग्राहकलाई सुविधा दिन सक्ने कुराहरु ?
:– सवभन्दा ठुलो चाहिँ यही प्रश्नमा अडकिन्छ । तपाई हामी सवैलाई थाहा छ , मितेरी वैंकमा आएपछि ग्राहकले आत्मा सन्तुष्टि पाउँछन् । यहाँ आइसकेपछि क्लाइन्टलाई जहिले पनि सन्तुष्टि र विस्वासनीय वनाउँछ ।हामी मितेरी वैंक १४ औं वर्षमा छौं ।
हामी अहिले सम्म आइपुग्दा २ वटा केस मात्रै छन धितो लिलाम गरेका छौं । त्यसैले हामी ग्राहकसँग हामी धेरै वेर कुराकानी गछौ । जे व्यवसाय हो , त्यो व्यवसायमा उस्को अनुभव, विश्लेषण गरेर मात्रै कर्जा प्रवाह गछौं । व्यवसाय वढाउने नाममा क्रणीको घर जग्गा नै जाने स्थिती आउनवाट वच्न र वचाउनको लागि सजग गराउँछाैं ।
८. यहाहरुले ग्रामीण भेगमा शाखाहरु विस्तार गर्नुको कारण के हो ?
:– नेपाल सरकारको निति सवै मान्छेको वैंक वितिय क्षेत्रमा खाता रहोस भन्ने छ । हामी शहर केन्द्रित मात्रै भयौं भने ठुल–ठुला कारोबार हुन सक्छ । तर हामीले वैंकिङ नजानेको मान्छेलाई वैंक सम्म ल्याइयो भने सन्तुष्टि मिल्छ । उसलाई वैंक मार्फत उस्को जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकियो भने सहयोग मिल्छ ।
उस्का लागि वैंकले जीवनमा परिवर्तन ल्याएको हुन्छ । अनि हामीलाई पनि यस्ता कुराहरुले जुन कुरा साना हुन्छन् तर आत्मा सन्तुष्ट मिल्छ । ग्रामीण भेगका मानिसहरुको जीवनमा व्यवसायिक परिवर्तन आउँछ। अनि हामीलाई पनि यस्ता कुराहरुले आत्मा सन्तुष्ट मिल्छ ।
(वाँकी पुरा भिडियो हेर्नु होला )